Uzbekistan Airways dia manampy làlana vaovao sy fifandraisana amin'i Rome Fiumicino
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Uzbekistan Airways dia manampy làlana vaovao sy fifandraisana amin'i Rome Fiumicino
Aprily 5, 2018
Uzbekistan Airways dia miasa amin'ny sidina efatra avy any Rome Fiumicino, Italia, mankany Tashkent, Ozbekistan. Ny fifandraisana marobe dia misy ankehitriny noho ny serivisy vaovao voalahatra isaky ny talata ho any Urgench, renivohitry ny faritra Xorazm ao Ozbekistan.
Ny làlana vaovao dia hiala amin'ny seranam-piaramanidina Roma Leonardo da Vinci amin'ny 2045 ora, ary tonga amin'ny 0545 ny ampitso maraina. Ny fiverenana avy any an-drenivohitra Ozbeky dia voalahatra amin'ny ora 1520 eo an-toerana, hipetraka any Roma amin'ny fotoana italianina 1915.
Raha ny filazan'ny mpitantana ny firenena Uzbekistan Airways, Kushnud Artikov, “Italia dia iray amin'ireo tsena lehibe ho an'ny Ozbekistan Airways.” Ny solontena italianina ao amin'ny GsAir - solontenan'ny marketing any Uzbekistan Airways - dia nilaza fa ny fitomboan'ny matetika dia manokatra fotoana vaovao hisian'ny fitomboan'ny orinasa eo amin'ny firenena roa tonta. "Raha tamin'ny taona 2017 dia efa nahatratra 37,000 ny fahatongavanay tonga avy tany Italia, midika izany fa manomboka mahasarika olona mpizahatany italianina ny Uzbekistan Airways, ary manantena izahay fa hampiditra mpandraharaha fizahan-tany manan-danja hanamafisana io antso io."
Ny fahafaham-po amin'ity fanitarana ny sidina an'ny orinasa Ozbeka ity dia nasehon'i Marco Gobbi ihany koa, ny Longer-Haul Route & Manager an'ny Long-Haul Aeroporti di Roma: izay maneho ny tsena manana fahafaha-mivoatra ampy. "
Ny fifamoivoizana an-habakabaka, noho izany, dia afaka manampy ny fizahan-tany, iray amin'ireo teboka efatra ao afovoan'ny drafitra fampandrosoana tadiavin'ny governemanta Ozbeka miaraka amin'ny fampiasam-bola, ny toekarena ary ny varotra ivelany. Nandritra ny takarivam-panentanana, ny filohan'ny Repoblikan'i Ozbekistan any Italia, Rustam Kayumov; ny filohan'ny Fikambanana Italia-Ozbekistan, Ugo Intini; ary manam-pahaizana iray amin'ny firenena, Profesora Magda Pedace, no nanazava tamin'ireo mpandraharaha mpizahatany sy ireo vahiny italianina hafa ny mampiavaka an'io toerana io izay mipoitra, manomboka amin'ny Samarcanda malaza izay fantatra amin'ny moskea sy ny mausoleum ao amin'ny Silk Road mankany amin'ny renivohitr'i Tashkent.
Vonona ny hitangorona ny mponina sy ny mpizahatany! Hawaii dia mitarika hetsika an-dalambe lehibe indrindra: Waikiki SPAM JAM®
Port Canaveral mankalaza ny "fambolena" hazo solar